Tsiahy : Ny nahaterahan'ny Fiangonana FJKM .
ANOMEZAM-BONINAHITRA AN’ANDRIAMANITRA NY FINOANA.
Hafatry ny Filohan’ny FJKM Nov 2018
Ny Asa atao amin’ny fahendrena
Article publié le dimanche 18 mars 2012.
TANTARAN’NY FJKM .
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan’i Pasteur RALIBERA Daniel , notsoahana avy tao amin’ ilay bokikely navoaka ho fahatsiarovana ny faha-30 taonan’ ny FJKM (1968-1998) sy ny faha- 180 taona nahatongavan’ny LMS teto Madagasikara ( 1818- 1998).
Raha mijery ny FJKM amin’ny endriny ankehitriny ianao , toy ny hoe : Fiangonana manana izay maha-izy azy eo amin’ny sehatry ny firenena na ny sehatra iraisam-pirenena , dia tsy tokony hohadinoana fa làlan-tsarotra no nodiaviny vao tonga amin’izao toerana izao izy .
Toe-javatra roa ihany no ampahatsiarovana .
Efa voalaza fa naseho tamin’ny fomba hita maso ny fijoroan’ny FJKM tamin’ny 17 Aogostra 1968 , ny ampitson’ny 18 Aogostra 1968, izay nahatsiarovana ny faha-150 taona nahatongavan’ny Misionera LMS voalohany (David Jones sy Thomas Bevan) dia mbola nisy fanompoam-pivavahana nanetriketrika indray tao amin’ny Tranovato Anjoma (Toamasina). Nanatrika izany Atoa Tsiebo Calvin, Visy Prezidan’ny Governemanta , Atoa RABEMANANJARA Jacques , Minisitra sady Ben’ny tanàn’ i Toamasina . Nanaitra ny rehetra ny nandraisan’ny masoivohon’ny Grande Bretagne SE.Mervyn BROWN fitenenana tamin’ny teny Malagasy . Herinandro taty aoriana dia ny Filohan’ny nosy mihitsy , Andriamatoa Philbert TSIRANANA izay nanatrika ny fanompoam-pivavahana tao Mahamasina no niarahaba ny FJKM ; Kanjo nony napetraka teo amin’ny Ministeran’ny Atitany ny hanekeny ny FJKM, dia fandavana no valiny.
Antony roa no nahatonga izany :
1-Ny andininy faha- 202 tao amin’ny foto-dalàna tamin’izany izay nanambara fa ny fanompoam-pivavahana atrehan’ny manam-pahefana dia toy “ny fanompoam-pivavahana rehetra ka tsy azo atao fanao eny ivelany toy ny kabary, fampidirana ny sainam-pirenena”. Andininy efa nisy tao amin’ny foto-dalàna FPM io ary neken’ny fanjakana , fa nony nampidirina tao amin’ny foto-dalàna FJKM dia nolaviny.
2-Vokatry ny tsy nahaizan’ny FJKM nanolotra tamin’ny fanjakana”statuts Organiques” fohy , mazava , maneho ny rafi-pandaminana sy ny tompon’andraikitra . Ny foto-dalàna nalefa tany amin’ny Ministeran’ny Atitany dia nitambaran ‘ny Foto-dalàna sy Fitsipika . Ohatra iray no aoka homena : ny Foto-dalàna FJKM dia nilaza fa “ Jesoa Kristy no lohan’ny Fiangonana sy Tompon’ny fiangonana”. Tsy nifankahazo ny hevitra satria ny atao hoe : Fiangonana teo amin’ny FJKM dia “ny vahoakan’ Andriamanitra” , fa tamin’ny Ministeran’ny Atitany kosa dia ny trano fiangonana . Tsy mety voalamina izany raha tsy efa nirodana ny fitondran’ Andriamatoa Philbert TSIRANANA , ka nandray ny fitondrana ny Jeneraly Gabriel RAMANANTSOA . Ny Kolonely Richard RATSIMANDRAVA no nanao ny “Didy fanapahana , laharana 2175 tamin’ny 6 Jolay 1972 , izay navoaka tamin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblika Malagasy (JORM) tamin’ny 15 Jolay 1972 , takila 1461”. Nivory indrindra tany Mahajanga ny Synoda Lehibe faha-3 no tonga ny telegrama nalefan’i Kolonely RATSIMANDRAVA , ka tehaka sy horakoraka no nandraisan’ny mpivory izany vaovao mahafaly izany . Fa ny tena làlan-tsarotra nodiavin’ny FJKM dia ny fizorana ho amin’ny tena firaisana . Na dia neken’ny Synoda Lehibe sy ny fanjakana aza ny fijoroan’ny FJKM dia azo lazaina fa mbola “bemiray” ihany izy nandritra ny taona maro. Na dia nampiasa Baiboly sy fihirana niombonana aza ny kristiana avy amin’ny LMS sy FFMA ary ny MPF dia azo lazaina fa nanana izay tarazo nahazatra azy sy niainany ny tsirairay. Sarotra ihany ny nampiray ny LMS sy FFMA zatra fahalalahana, fahaleovan-tena , fanandratana ny Fiangonana eo an-toerana (église locale) sy ny MPF nozarina hanaraka ny hevitra tapaky ny Synoda Lehibe , hanao ho tena zava-dehibe ny raharaha iombonana. Tsy mora tamin’ny LMS sy ny FFMA ny hanaraka ny Litorjia araka izay hita ankehitriny na dia efa voarakitra tao amin’ny “toro-hevitra” ho an’ny Mpitandrina aza izany fahiny , ka isan’izay ampiasaina . Isaorana ny Tompo fa “tantara sisa izany voalaza izany” . Làlan-tsarotra avokoa ireny , nefa làlana tsy maintsy lalovana ary tsy misy ny tongatonga ho azy fa misy dikany izay tsy takatry saintsika ankehitriny , fa ho takantsika rahatrizay . Hoy ny vavaka nataon’ny Tompo tao anatin’ny ora sarotra nolalovany :“Raiko ô raha azo atao , esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao , fa ny Anao ( Matio 26:39). Maty ny Tompo , nalevina , nidina tany main’ny fiainan-tsy hita, nefa koa nitsangana tamin’ny maty ary mipetraka eo an-kavanan’ Andriamanitra .
Nandresy hatramin’ny fahafatesana Izy , fandresena mandrakizay...
Notsongaina tao amin’ny Gazety Tanora Fianarana , laharana 001 , Avrily 2011 . .
Vendredi 21 Février 2020 - 13:18:57